Matongerwo eNyika, 18 Kurume 2017
Mugovera 18 Kurume 2017
Vanhu Vopesana paBhiri reKupodza Maronda neKuregererana Munyika
Musangano wekunzwa zvinodiwa nevanhu kuti zvinge zviri mubhiri rekupodza maronda nekugarisana murunyararo waitirwa muChinhoyi neChishanu hauna kuzopera zvakanaka apo vamwe vapinda mumusangano uyu vanga voimba vachinyongana.
Kurume 16, 2017
Kambani Itsva yeSemende Inoparurwa muHarare naVaMugabe
Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vakumikidza chigayo chesimendi chinokosha mamiriyoni makumi masere nemaviri emadhora muHarare chekambani yekuSouth Africa yePPC vachiti zvinofadza kuti kambani iyi iri kutevedza mutemo wenyika wekupa masimba vatema munyaya dzehupfumi.
Vanopikisa Vonetsana paMichina yeKunyoresa Vavhoti
Munyika maita kusawirirana panyaya yekuvandudza gwaro revavhoti pachishandiswa michina yemacomputers kana kuti Biometric Voter Registration (BVR) kits.
Vanotengesa Mumigwagwa Vochema Zvichitevera Kuputsirwa paVanotengesera
Sangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation, (VISET) rinoti riri kushoropodza zvikuru danho rekanzuru yeguta reHarare rekuparadza kwayakaita misika yevanhu pamwe nekuparadza zvinhu zvavo panzvimbo yemabhizimusi yeBudiriro 5 svondo rino.
Amai Makarau Vanojekesa Michina yeKunyoresa vaVhoti yeBRV
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission, Amai Rita Makarau, vanoti vanhu vanofanira kuziva mutsauko uripo pakati pemichina yekunyoresa vanhu kuvhota nenyaya yekuvhota vanhu vachishandisa macomputer sezvinoitwa munyika dzakabudirira dzakaita seAmerica kana kuti e-electronic voting.
Kupambwa kweMadzimai Kwozeyiwa nuNew York
Musangano mukuru weUnited Nations - Commission on the Status of Women, CSW 61, wekuzeya zviri kutarisana nevanhukadzi watanga zvakare neChitatu muguta reNew York mushure mekumbomiswa kwezuva rimwe nekuda kwechandomupengo.
Fodya Inotanga Kutengeswa Nyika Ichitarisira Kuwana Mari Yakawanda
Varimi vazhinji varatidza kusafara nekutadza kushanda kwaita michina yechizvino zvino yekutenga nayo fodya izvo zvazoita kuti fodya itengwe pachishandiswa zvagara zvichiitwa makore ose.
Huwandu hweVanasikana Vari Kuita Nhumbu Hworamba Huchikwira, UNFPA
Gurukota rinoona nezvehutano Dr David Parirenyatwa vanoti vari kushushikana zvikuru nehuwandu hwevanasikana vari kubata pamuviri vasati vabva zera.
Kurume 14, 2017
Gakava reGukurahundi Rotsviriridza muBulawayo
Vanhu vakawanda vataura pamusangano uyu vashora bhiri iri vachiti haritauri zvakajeka pamusoro penyaya yeGukurahundi vachiti kana nyaya iyi isina kutaurwa pachena nezvayo, munyika hamufe makaita runyararo kana kuregererana kwechokwadi.
Kutengeswa kweMidziyo yeVagari Kwokonzera Mutauro muHarare
Paita ropa rakaipa pakati pameya weHarare VaBernard Manyenyeni nevakafanobata chigaro chemunyori mukuru weguta amai Josephine Ncube panyaya yezvikwereti zvine vagari, hurumende uye makambani akazvimirira kukanzuru.
Pastor Mugadza Votambira Kugara Kwavo Mutirongo seKuronga kwaMwari
Pastor Mugadza vakasungwa musi wa 16 Ndira panze pedare ramejasitiriti muHarare apo vakanga vari vachitongwa mune imwe mhosva yavari kupomerwa, yekuzvidza mureza wenyika.